Akhriso: Heerka musuqmaasuqa mid ka mid ah maamulada somalida - KALA SOCO - Wargeysyada ugu fiican ee Soomaalida ah ee bixiya warka ugu dhaqsaha badan uguna macquulsan. | KALA SOCO – Wargeysyada ugu fiican ee Soomaalida ah ee bixiya warka ugu dhaqsaha badan uguna macquulsan.
Akhriso: Heerka musuqmaasuqa mid ka mid ah maamulada somalida
September 9, 2019 1:35 PM - Written by Warbaahinta AlloolNews
Musuq maasuq daran ayaa aafeeyay Hirshabeelle tan iyo markii la’ aas aasay, waxaana bil walba sii kordha heerka musuq maasuqa degaanka.
Maamulkaan oo ay maalintii soo gasho ugu yaraan 20 kun oo doolar, ayaa lacagtiisa loo qaybsadaa 2 heer oo kala ah.
Lacagta ka soo baxda Shabeelada dhexe oo lagu qiyaaso 8 kun oo doolar maalintiiba, waxay ku dhacdaa Akoon uu leeyahay Madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen (Cali Guudlaawe) mana jirto qof lacag laga siiyo, marka laga reebo dhowr malyan oo Shilin Soomaali ah oo maalintii laga siiyo maamulka gobalka Shabeelada dhexe.
Lacagta gobalka Hiiraan oo gaareysa 10 kun oo doolar maalintiiba, ayaa waxaa lagu ridaa Akoon ay siwadajir ah u maamulaan Madaxweynaha, Guddoomiyaha Gobalka Hiiraan iyo Xiriiriyaha gobalka iyo Madaxweynaha, Maxamed Cabdi Waare.
Hirshabeelle waxaa mushaar qaata oo kaliya Shaqaalaha Wasaaradda Maaliyadda oo aan dhamaaneyn 15 qof, iyo Baarlamaanka oo aan labadooduba joogto helin, waxaana mushaarka Baarlamaanka laga bixiyaa lacagta lagu helo dowladda dhexe oo 150 kun oo doolar ah bishiiba.
Shaqaalaha Wasaaradda Maaliyadda mushaarkooda waxaa bixiya hey’ad caalami ah oo kabta maamul gobaleedyada. Hey’ado badan ayaa isku dayay in ay saxaan nidaamka maaliyadda Hirshabeelle balse ilaa hadda kuma guuleysan.